Baaq Kasoo Baxay Jaaliyada Awdal Salel Iyo Gabiilay Ee Fadhigoodu Yahay Jeeddah Sauda Arabia.
Digniin iyo baaq wada socda oo kasoo baxay jaaliyada SAUDI ARABIA ee gobolada (Awdal /Selel /Gabilay) waxaan halkan kala hadlay naa xildhibaanada kasoo baxay degmada lughaya iyo waxgaradka siyaasinta culumada dagmada Lughaya Saylac hadaan nahay jaaliyada wadankaSAUDI ARABIA GAAR AHAN JEDDAH waxaa aan aqbalilaanahay ama na gali waayay waa dhawaqii kasoo yeedhay shirkii xildhibaanada degmada lughaya ee lagu dooranayay maayirka iyo ku xegen kiisa.
Hadaan nahay jaaliyada SAUDI ARABIA waxii halkaa ka dhacay waan kasoo horjeedna waayo nin an adiga waxba ku ogolayn hadana an joogin shirka oo ku yaraysatay inaad wax uuna meesha ku lahayn aad u ogolaato waa nasiib daro ku habsatay degmada Lughaya.
Maalin an maanta ahayn ayaa laga qoomamoon doona waa ninkii shalay kugula doodaayay ee lahaa waxaan leehay Lughaya maantana kuu diidan codka ad kaga soo baxday degmada Saylac ee awgii wali u cakiran tahay ayaad la daba cara raysan jago. waxay kugu noqon doonta lafdhun gashay.
Waxaa lajooga 2013 xili dhul dad loogu deeqo ama hadiyad loo siiyo lama jooga ee waa xiligii wax la xajisan lahaa markaa arintu waa lughaya uraysate waa waxay dhashaa biyo saray tagay waa lasugayaa xidhibaanada lughaya waa la sugaya inay samcad xumo kaga tagaan iyo inay gobonimo ku dhintaan
Hadal kaygani waxan ku soo gababa gabeynayaa manta xildhibaaanoow
Go aanku gacantiinuu ku jiraa